तीन पत्र डायरीका - लघुकथा - साप्ताहिक
प्रिय पूर्वप्रेमिका सुसाना!
पहिल्यै आत्म स्वीकृति— मैले तिमीलाई बिर्सिनुपथ्र्यो/पर्छ । यो रमाइलो पीडा हो । साँच्चै बेजोड बेढङ्गी यादहरूको सङ्ग्रह हो जिन्दगी । आजकाल यस्तै लाग्न थालेको छ । तिमीलाई भुल्नु पनि आगोजस्तै लाग्छ । तिमीलाई सम्झिराख्नु पनि आगोजस्तै लाग्छ । शान्त पोखरीमा गिट्टी फालिरहेको छु । तरङ्ग उठिरहेको छ । यो पत्र पढेर तिमी तरङ्गित छौ । तिमीलाई पक्कै पनि विरसिलो लागेको हुनुपर्छ । वास्तवमा म यही थाहा दिन चाहन्छु कि तिमीले छोडी गएपछि म एक्लो छैन । तिम्रा सम्झनाहरू साथमा छन् । हो, यति नै पनि पुग्दो छ तिमीभित्र बेचैनी रोपिदिन । यद्यपि म उसै/त्यसै किन छोड्थे र तिमीलाई !
(तिमीले छोडेको सात दिनपछिको डायरीबाट)
प्रिय सुसाना !
अविश्वासनीय र अकल्पनीयको संयोग हो रहेछ जिन्दगी । तिमी मेरी पहिली थियौ, यो हृदयलाई छुने, मलाई स्त्री र पुरुषको भिन्नता बुझाउने । तिमी त मेरी बाल्यकालकै साथी थियौ । मेरा निक्कै अनुभवहरू तिमीसित साझा छन् । मैले उनै कुरा फेरि गर्दा तिमीलाई सम्झिएको छु र यो कुरा मैले कामिनालाई भन्नु उचित मानेको छैन । ऊ मलाई असाध्यै प्रेम गर्छे जस्तो म तिम्रो प्रेममा बौलाउँछु, तर पनि ऊ र मबीच केही दूरी अवश्य छ । त्यो हो तिम्रो सम्झना । म कामिनासित रात बिताउँछु । खै के–के गरेर बित्छ रात पनि ! तर तिमीलाई आरोपित उसमा गरेरै बित्छ । साँच्चै जब हामी साथै रात कटाउथ्र्यौं मलाई उज्यालो चाहिन्थ्यो । तिम्रो मादक यौवनलाई आाखाहरूले पिई बस्थे, तर कामिनाप्रति ममा त्यस्तो सोच छैन । अँध्यारोमा पक्कै पनि निक्कै कुराहरू हुन्छन् नै, तर म तिमीलाई पाउँछु कामिनामा/अँध्यारोमा ।
(तिमीसित नभेटको ६ महिनापछिको डायरीबाट)
सम्भवत: अब तिमी मसित आउनेछैनौं । म यो समयमा नितान्त एक्लो छु । किनभने कामिनासित पनि छुटेको अब धेरै दिन भयो । तिमीले छोडी गएको बेलाझैँ दु:खी छु । कोही भेट्नुअघिको एक्लोपन र छुट्टिएपछिको एक्लोपन धेरै विसंगत कुरा हुन् । अन्त्यमा यही आशा गर्छु कि तिमी अब पहिले जस्ती घमन्डी र जिद्दी छैनौ ।
पोखरीमा गिट्टी फाल्ने मान्छे!
(कामिनासित छुटेको एक महिनापछिको डायरीबाट)
तीन सेकेन्डमा फिल्म डाउनलोड हुने वाइफाई
हामी तीन भाइ
बाहिरी रूप असार ३२, २०७५
म्यासेज ब्लक आश्विन २१, २०७४
पोइटिङ्ग्रे जेष्ठ २१, २०७४
परिवर्तन वैशाख २३, २०७४
मेरी छोरी वैशाख १६, २०७४
फेसबुक फाल्गुन १५, २०७२
परिचय मंसिर १, २०७२
हाफटाइम कार्तिक ९, २०७२
बाध्यता आश्विन ६, २०७२
आमाको माया श्रावण २८, २०७२